Tag: plugin plugin | Martech Zone
Suugaanta Webka Bulshada: Madal Maareynta Warbaahinta Bulshada ah oo loo dhisay Qorayaasha WordPress
Sabtida, Maarso 20, 2021 Axad, Maarso 21, 2021 Douglas Karr
Haddii shirkaddaadu daabacdo oo aysan u isticmaalin warbaahinta bulshada si wax ku ool ah si ay u dhiirrigeliso waxyaabaha, waxaad dhab ahaan u maqantahay waxoogaa taraafiko ah. Iyo… natiijooyinka wanaagsan, boosteejo kastaa waxay runti isticmaali kartaa xoogaa habeyn ah oo kusalaysan barta aad isticmaaleyso Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira xulashooyin kooban oo loogu talagalay daabacaadda otomaatiga ah ee ka socota boggaaga WordPress: Inta badan barnaamijyada daabacaadda ee warbaahinta bulshada waxay leeyihiin muuqaal aad kaga daabacan karto RSS feed. Ikhtiyaar ahaan,
Arbacada, Maarso 3, 2021 Arbacada, Maarso 3, 2021 Douglas Karr
In kasta oo suuqleyda badankood ay si fudud foom ugu geliyaan bogga WordPress, taasi maahan daruuri in sifiican loo habeeyay, bogga soo degitaanka ee aadka u beddelaya. Bogagga degitaanku sida caadiga ah waxay leeyihiin dhowr astaamo iyo faa'iidooyin la xiriira: Waxyaabaha Yar-yar ee Jilicsan - Ka fikir bogagga degitaankaaga sida dhammaadka wadada oo leh carqalado yar. Raadinta, baararka dhinac, cagaha, iyo waxyaabo kale ayaa ka jeedin kara booqdahaaga. Dhismaha bogga soo degida ayaa kuu oggolaanaya inaad bixiso waddo cad oo loogu beddelayo adigoon ka jeedin. Isdhexgalka - Sida a
Mid ka mid ah aaladaha aan ugu jeclahay cabbiraadda iyo daabacaadda quudintayda RSS ama qoraalkayga warbaahinta bulshada waa FeedPress. Nasiib darrose, barxaddu ma lahan is-dhexgalka LinkedIn, in kastoo. Waxaan u soo baxay si aan u arko haddii ay ku darayaan oo waxay bixiyeen xal kale - ku daabacida LinkedIn iyada oo loo marayo Zapier. Zapier WordPress Plugin ilaa LinkedIn Zapier waa u bilaash in yar oo isdhexgal ah iyo boqol dhacdo, marka waan isticmaali karaa xalkaan